Algeria: "Ahmed Ouyahia ma noqon karo musharaxa RND, wuu dhimanayaa siyaasad" - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Algeria:« Ahmed Ouyahia ma noqon karo musharraxa RND, wuu dhimanayaa siyaasad »- JeuneAfrique.com
Xisbiga Dimoqraadiga Qaranka (RND), oo ah xisbiga labaad ee baarlamaanka iyo xubin ka mid ah isbahaysiga madaxtooyada, ayaa ku jira xaalad murugo leh. Belkacem Mellah, oo ka mid ah muddada dheer ee ka soo horjeeda Xog-hayaha Guud iyo Ra'iisul-wasaarihii hore ee Soomaaliya Axmed Ouyahia, ayaa soo jeediyay in ay qabtaan shirweyne khaas ah oo loogu talagalay in lagu magacaabo guushii ugu dambaysay. Dayactirka.
inta u dhaxaysa Axmed Ouyahia iyo Seddik Chibab, furiinka waa la wada baabbi'iyey. Isniintii, April 8, afhayeenka xisbiga ayaa laga saaray xafiiskiisa xafiiska qaranka. War saxaafadeed, ayaa sidoo kale laga soo saaray xafiiska xoghayaha guud ee xafiiska wilaya ee Algiers, ka qaybqaadashadiisa xoghayaha guud ayaa la hakiyey.
Xayiraadda soo socota, sida ku qeexan qoraalka, "ficillada kacdoonka" ee qofka heerka heerarka qaab dhismeedka xisbiga wilaya ee Algiers, iyo "hadaladiisa lid ku ah jagooyinka xisbiga". Xaqiiqdii, maalinta ka hor, dhammaadkii kulan uu guddoominayay, dhaqdhaqaaqayaasha qaybta RND ee Algiers ayaa dalbaday "si degdeg ah"Ahmed Ouyahia, xoghayaha guud ee dhismaha muddo toddoba iyo toban sano ah - marka laga reebo mudaharaad ka dhex dhacda 2012 iyo 2015.
>>> READ - Algeria: "Seddik Chihab kaliya ayaa ka gudubtay tartan joogto ah RND »
Uma aqoonsan awoodda madaxweynihii hore ee dawladda, koox isku mid ah ayaa ku dhawaaqday in laga mamnuucay qaybta Algerian, waxayna ka codsatay dhammaan xubnaha in ay ku soo biiraan "geedi socodka soo kabashada" ee RND iyo in tababarku uu ku habboon yahay "rabitaanka iyo rajada maamulayaasha iyo dhaqdhaqaaqayaasha".
Marka la barbardhigo duelkan, dhaqdhaqaaq kale oo mudaaharaad ah waxaa hoggaamiya Belkacem Mellah. Xubin ka mid ah xubinimada iyo musharaxa ka soo horjeeda Ouyahia ee 2016 ee madaxweynenimada, wuxuu sidoo kale doonayaa in uu dib u cusbooneysiiyo dhismaha RND si uu si wanaagsan u diyaariyo doorashooyinka xiga ee madaxweynaha iyo sharci dejinta. Waxa uu sharaxayaa Dhallinyarada Afrika sababaha caqabada.
Dhalinyarada Afrika: Waxaad hormarineysaa dhaqdhaqaaqa diidan ee RND. Maxay yihiin baahidaada?
Belkacem Mellah: Annagu kuma jirno Seddik Chihab ama Ahmed Ouyahia. Annaga naga tag, xoghayaha guud waa in la sameeyaa dhammaan kooxdiisa.
Ma ahan kan kaliya ee doonaya isbeddelkan: waxaa taageeraya dad badan oo 600 iyo xubnaha 156 ee golaha qaranka, laga soo bilaabo 36 wilayas on 48 ee xisaabtanka dalka
Waxan dalbanaynaa in la qabto shir aan caadi aheyn si loo hubiyo dib u soo celinta xafladda. Ma ahan kan keliya ee doonaya isbedelkan: waxaa taageera 600 xubno ka tirsan 156 iyo xubnaha 36 ee Golaha Qaranka, oo ka yimid 48 wilayas on XNUMX ee xisaabtanka dalka. Kulankan, waxaan dooran doonaa Xoghayaha cusub iyo Xafiiska Siyaasadda Cusub.
Suudaan, haweenka ku jira qalbiga Intifada - JeuneAfrique.com